के हो शिशुहरुमा देखिने ‘सुपर जेनीटेलिया’को समस्या ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ महिला/बाल स्वास्थ्य ∕ के हो शिशुहरुमा देखिने ‘सुपर जेनीटेलिया’को समस्या ?
के हो शिशुहरुमा देखिने ‘सुपर जेनीटेलिया’को समस्या ?
डा. आरपी चौधरी बाल शल्यचिकित्सक तथा कार्यकारी निर्देशक इशान महिला तथा बाल अस्पताल बिहीबार, २०७६ असोज ९ गते, ११:३२ मा प्रकाशित
कुनै पनि आमाले शिशुको स्वस्थ्य जन्मको निम्ति आफ्नो गर्भ तथा आफ्नो उचित ख्याल राखेकी हुन्छिन् । उनीहरु अन्य समयभन्दा गर्भावस्थामा आफ्नो उचित ख्याल राख्ने गर्छन् । तर, तीमध्ये प्रत्येकले जन्म दिएका शिशुमा कुनै पनि किसिमको स्वास्थ्य समस्या देखा नपर्ने भन्ने हुँदैन् ।
कतिपय शिशुहरुको शारीरिक विकासक्रममा नै विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखा पर्छन् । त्यस्ता अधिकांश केशहरुमा शिशुको तत्काल अप्रेशन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तीमध्ये शारीरिक बनावटमा समस्या देखिएको आँखै खुलेका तथा आन्द्रा एक आपसमा जोडिएकाजस्ता समस्याहरुलाई जटिल समस्याको रुपमा लिइन्छ । यहाँ हामी अन्ननली र श्वासनली जोडिएका शिशुको सर्जरी बारे छलफल गर्दैछौं ।
बच्चाको श्वासनली र अन्ननली एक आपसमा जोडिएको अवस्थालाई हामी मेडिकल भाषामा ‘सुपर जेनीटेलिया’ भन्छौं । भर्खरै मात्रै हामीले यस्ता समस्या भएका दुई शिशुको सर्जरी गरेका थियौं । ‘सुपर जेनीटेलिया’ आफैमा एउटा जटिल सर्जरी हो । जन्मेर भर्खरै २ वा ३ दिन भएको सानो शिशु जो जम्मा २ देखि ३ केजीका हुन्छन्, उनीहरुको अप्रेशन गर्नुपर्ने अवस्था यो आफैमा एक चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यस्ता अप्रशेनमा अप्रेशनद्वारा शिशुको जोडिएको उक्त श्वासनली र अन्ननलीलाई छुट्याइन्छ ।
तयारीका साथ अप्रेशन गरिएपछि शिशुको निम्ति छुट्टै एक कक्षको आवश्यकता पर्दछ । यस्ता अप्रेशन कुनै पनि एकल चिकित्सक र विशेषज्ञद्वारा सम्भव हुँदैन । यसको निमित्त टिमवर्कको आवश्यकता पर्दछ । अन्र्तराष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार करिब ५ देखि १० हजार शिशुमध्ये १ जनालाई यस्तो समस्या देखा पर्ने गरेको छ ।
समस्या देखा पर्नुका मुख्य कारण
कुनै पनि शिशुको भ्रुण अवस्थामा विकास हुने क्रममा विभिन्न ग्रन्थीहरु बन्न थाल्छन् । त्यसबेला नै अन्ननली र श्वासनली अलग्गै एउटा पर्दाबाट छुट्टिनुपर्छ । त्यो पर्दाको विकास नभएको खण्डमा उक्त खाने नली र श्वासनली एक आपसमा जोडिने हुन्छ । प्रायजसो योजनाबिना नै गर्भ बोकेका महिलाहरुको शिशुमा देखापर्ने यस रोगका विभिन्न कारणहरुमध्ये केही कारण यसप्रकार रहेका छन्ः
गर्भवती महिलामा कुनै किसिमको समस्या तथा रोग भएमा
गर्भवती महिलाले चिकित्सकको सल्लाह बिना नै औषधिको सेवन गरेमा
बाहिरी पर्यावरणको प्रभावका कारण
धुम्रपान तथा मद्यपान सेवन गर्ने गर्भवती भएमा
वातावरण विकिरणका कारण
शिशुमा यस्तो समस्या नदेखियोस् भन्नका निमित्त सर्वप्रथम कुनै पनि महिला दम्पतीको योजनाअनुसार गर्भवती हुनु पर्दछ । गर्भवती भइसके पश्चात् नियमित चेक जाँच गराउनु पर्ने अवस्था त छदैंछ, यसबाहेक पनि प्रत्येक महिलाले आफू गर्भवती हुनु अगाडि पनि आफ्नो स्वास्थ्य चेक जाँच गराई सम्बन्धित चिकित्सकसँग आवश्यक परामर्श तथा सर–सल्लाह लिनुु पर्दछ ।
स्वास्थ्य चेकजाँच गराई स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्या देखा नपरेको खण्डमा मात्रै शिशु जन्माउने योजना बनाउनु पर्दछ । सदैव र प्रत्येकलाई हानिकारक मानिने मद्यपान र धुम्रपानजस्ता लागूपदार्थको सेवन गर्भवती महिलाले कुनै पनि अवस्थामा गर्नु हुँदैन । यसैगरी चिकित्सकको सल्लाहबिना कुनै पनि औषधिको सेवन नगरेमा यस्ता समस्या देखा पर्नबाट बच्न सकिन्छ ।
तर, कतिपय अवस्थामा उचित केयर गर्दागर्दै पनि कयौं शिशुहरु यस्ता समस्याको शिकार बन्न पुग्छन् । त्यस्तो अवस्थामा हामीले पहिचान भएका शिशुहरुको तत्काल अप्रेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो समस्या भएको कुनै पनि शिशुको पहिलो तथा अन्तिम उपचार नै अप्रेशन हो । अन्यथा शिशुको अन्ननली श्वासनलीसँग जोडिने भएकोले शिशुले आमाको दुध समेत खान सक्दैनन् ।
र केही पनि नखाएको अवस्थामा शिशु जिवित रहने सम्भावना रहँदैन् । त्यसैले हामीले शिशुको तत्काल अप्रेशन गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ । अप्रेशन गरिसकेपछि पनि अन्य किसिमका समस्या भएका बालवालिकाको विषयमा भने केही भन्न सकिदैन् । तर, यो समस्या मात्रै देखा परेको शिशुको अप्रेशनपछि भने कुनै पनि शिशु आम रुपमा अन्य बालवालिका झै आफ्नो जीवन जीउन सक्षम हुन्छन् ।